Ziziphi ubungqina kwiimidlalo?
Psychology and Relationships Ukuzihlaziya
Ziziphi iimpawu kwi-Intanethi?
Ubuchwephesha bwanamhlanje butshintshe iteknoloji kuphela, kodwa kunye nenkcubeko kunye nolwimi. Ikhefu yekhompyutheni, eyavela njengelwimi lobuchwephesha beeprogram kwaye yajika yaba yinto engaqondakaliyo, yaxhaswa ngabasebenzisi abakhuluma isiRashiya. Isidingo sokwedlulisa ngokukhawuleza kolwazi senza ukuba sithandwa kakhulu kwintetho yansuku zonke.
Ubungqina - yintoni na?
Ngokufika kwe-Intanethi, izikhundla eziqinileyo kunye nolwimi oluseburhulumenteni zesiRashiya zihlala ziziNgesi. Ngokomzekelo, kwangoku ubu bungqina bungqina, kodwa umntu unokucinga ukuba ngelinye ilanga uthisha wezeMathematika kwisifundo uya kufaka ubungqina bolu bungqina. Ukuba sicinga ngokucacileyo umbuzo woluphi ubungqina, ngoko siyakwazi ukuchonga iintlobo ezintathu zentsingiselo yeli gama:
Ubu bungqina bubungqina okanye ukuqinisekiswa kwanoma yiyiphi ingxelo okanye inyaniso.
Ubu bungqina bubugcisa obukhethekileyo ekwenzeni iindondo kunye neengqekembe.
Ubungqina bomelele bokusetyenziswa kotywala, engasetyenziswanga ukususela ngo-1980.
Пруфлинк - yintoni le?
Ukuba ubungqina bubungqina, isiqhagamshelo sikhonkco. Ngaloo ndlela, i-pruflink ibhekisela kumthombo oqinisekisa ubungqina benkcazelo okanye ukunyaniseka kwento. Kwiingxabano, iingxelo ezingenakunceda azikho na umntu, ingakumbi xa kuziwa kwiinkcukacha ezingathandabuzekiyo. Abachasayo badinga ukuqinisekiswa, oko bangakujonga kumntu, ngokuchofoza kwikhonkco.
I-pruflink efanelekileyo kufuneka ihlangabezane nale mfuno elandelayo:
Kubalulekile ukubhekisela kumthombo ogunyazayo ongavumi ukungathandabuzeki malunga nokuthembeka kolwazi olupapashwe. (Imithombo ye-Wiki ayifumelani nale mfuneko, ngenxa yokuba bavula ukufikelela kokulungiswa kolwazi kunoma ubani ofuna.)
Ingqwalaselo yophando lwezenzululwazi, iindlela zayo kunye neziphumo ziya kuba zingenakulungiswa.
Akuyena wonke umntu owaziyo ukuthini i-photoprof, nangona le iproflink efanelekileyo - unxibelelwano kumqulu wesithombe. Iimpawu ezifanayo zineprofvideo - unxibelelwano kwingxelo evela kummandla, kunye ne-prufpik-isiqhagamshelo kumfanekiso.
Musa ukubhekisela kwimbono "yokugunyaza" yomntu, kuba akuyena wonke umntu. Ukongezelela, ulwazi, oluchazwe kumagama omntu, lufumana ingcaciso ngokuziphendulela kwaye lulahlekelwe yimpumelelo yalo.
Yintoni ubungqina kwi-intanethi?
I-intanethi inikezela ngamathuba amaninzi kungengcaciso kuphela, kodwa nakwizonxibelelwano kwiifom kunye nakwiinkonzo zentlalo. Abantu abangaqhelekanga bangena kwiingxaki ezahlukahlukeneyo, bekhusela ngamandla abo. Ngokuqhelekileyo, imbambano kwi-Intanethi - into engeyona nto, kunye nokuphikisana, njengomthetho, ukulandela iinjongo zabo eziziwayo kuphela.
Kwiingxabano zesayense ze-intanethi, iimbono eziphazamisayo zikhuthaza ukuveliswa kweengcinga ezintsha, kwaye ubungqina bubungqina obungasetyenziselwa ukuseka inyaniso.
Inzala enomdla yenkcaso kwiinkcukacha zenzalo kuye inikeza ithuba lokuchaza nokubonisa imbono yakhe kwingxaki. Ngenxa yoko kuyimfuneko ukuba ube nolwazi olufanelekileyo lwempikiswano yokubambisana, ukwazi ukuba yiziphi ubungqina kunye nokuzisebenzisa ngokufanelekileyo.
Inyaniso enyanisekileyo ayilungeleki kwaye ingaphoswa njengomqhubi, obizwa ngokuba yi "troll", owathi, ngokungaziwa, uyakufumana unomdla. Kule meko, imbambano ilahlekelwa yintsi ngiselo, kuba naziphi na iingxabano kunye nobungqina bokuba sisihlandlo sokubangwa nokuthukwa.
Uthungelwano lwehlabathi alukwazi nje ukukhulisa ukugqithisa, kodwa kwakhona lukhanyise ukuzonwabisa. Iimidlalo ze-Intanethi zikuvumela ukuba usebenzisane nabadlali ngamanye amawaka amawaka eekhilomitha kude. Kwilizwe elithengileyo, umdlali unako ukudlula inqanaba elincomekayo, uzuze okanye uzuze umvuzo wecala wangempela, kwaye wabelane ngalo mcimbi kwintanethi, unike isixhumanisi (oku kuthetha ubungqina kulwimi lwabadlali) ekuqinisekiseni.
Ubungqina - bunjani kwi-numismatics?
Enye yeempawu zobuNgqina ubungqina, uvavanyo, ikopi yoqinisekiso. Ekuqaleni, iintlobo zeemali zokuqala zabizwa ngokuba yiProofs, zenziwe zivunyiwe, kodwa isitampu esitsha. Kamva, yaziwa ngokuba yi-teknoloji ekhethekileyo yeemali kunye nokudonga umxube. I-Numismatists yazi kakuhle ukuba ubungqina bobubungqina bunjani kwiingqekembe:
Iileta zineemida ezixandekileyo kwaye zifumaneka kwinqanaba lama-90 degrees kummandla weengqekembe;
ummangalo unemodeli ngendlela yegril (ngenxa yesigxathu esiphambanweni kwesitampu).
Ukuzibandakanya - yintoni na?
Indlela yokufunda ukufunda ngokukhawuleza?
Izindlela zengqondo zithonya abantu
Intetho kwi Psychology
Kungcono ukukhumbula ulwazi?
Imisebenzi yoqhagamshelwano lwezoshishino
Ulawulo lwexesha - ukulawula ixesha
Iimpawu zokunxibelelana kunye nenkcubeko yokunxibelelana
Simoron - ukuzaliseka kweminqweno
Ukutya kwezemidlalo ukutshisa amafutha
Ijee zeJeans - iimfonto ezifake imfashini kunye neerikethi zeklasi kunye neembala
Ukuqhaqhaqhaqhaqhazeka kwemiphumo yemihlathi
Ukuvuvukala kweempawu zesifo se-sciatic kunye nonyango
Iifama ze-Crocodile (Langkawi)
Iingubo zehlobo ehlobo
Iimpawu zeConstellation - zibukeka njani kwaye zifumana njani le nkqantosi esibhakabhakeni?
Izixhobo zokuqeqesha isisindo sokunyusa umzimba
IGroats Kinoa - izixhobo eziwusizo
Isikhululo esikhulu kwisikhululo sehlabathi
Ukulima kwekhabishi ukusuka kwimbewu
Iingqondo zobuxoki - indlela yokuqonda ukuba umntu ulele, kwaye unokufunda njani ukuxoka kwaye ungabonakali?
Idada exutywe ngeklabishi
Amanxeba ngamagqabi ama-chihuahua amantombazana
51 ingcamango yokuguqula izinto zakho zakudala
Iibhotile ze-Decoupage ezineendwangu
Iimfashini zeeFestile zeHlabathi 2014